Kedu mgbe enwere ike igbu oge na ụmụaka? | Bezzia
Kedu mgbe enwere ike igbu oge na ụmụaka?
Maria José Roldan | 04/06/2022 13:28 | Nwa
Otu n'ime oge kacha atụ anya maka ndị nne na nna bụ mgbe nwa o nwere ike ikwu okwu na-ekwu okwu mbụ ya. Otú ọ dị, nwatakịrị ọ bụla dị iche, a ga-enwekwa ụfọdụ ndị na-akacha aghọta ihe ma a bịa n'ikwu okwu na ndị ọzọ na-esiri ike karị. Ime ntụnyere bụ otu n'ime nnukwu mmejọ ndị nne na nna na-eme, ọkachasị ma a bịa n'ịkwalite asụsụ.
Echegbula onwe gị ma ọlị n'ihe gbasara okwu ma nwee ndidi ruo mgbe oge dị otú ahụ bịara. N'isiokwu na-esonụ, anyị na-agwa gị mgbe nwa ọhụrụ na-amalite ikwu okwu na kedu oge enwere ike igbu oge n'okwu.
1 Nwa ọ bụla dị iche
2 Kedu mgbe enwere ike igbu oge asụsụ?
3 Otu esi enyere nwata aka na mmepe asụsụ
Nwa ọ bụla dị iche
A bịa n'ịkwalite asụsụ, a ga-ekwurịrị na nwa ọ bụla dị iche na chọrọ uda nke ha mgbe ọ na-ekwu okwu. Oge igbu oge na-eme mgbe ekwuru na mmepe asụsụ adabaghị n'afọ nwata.
N'ụzọ zuru oke, enwere ike ịsị na nwa ọhụrụ na-amalite ikwu okwu mbụ ya site n'otu afọ. Ka ọ na-erule ọnwa 18 nwa ọhụrụ kwesịrị inwe ihe dị ka otu narị mkpụrụokwu n'okwu ya na mgbe ọ dị afọ abụọ, okwu ya kwesịrị ịgbasa ihe dị ka okwu 100. Na 3 afọ, ha kwesịrị ime ahịrịokwu nwere ihe atọ ma nwee ihe dị ka okwu 1500.
Kedu mgbe enwere ike igbu oge asụsụ?
Enwere ike inwe nsogbu asụsụ mgbe ọ dị afọ abụọ enweghị ike iji mkpụrụokwu abụọ mepụta ahịrịokwu. Enwere ọtụtụ mgbaàmà ndị nwere ike igosi na ọ na-egbu oge n'ikwu okwu, karịsịa mgbe ọ dị afọ 3:
Enweghị ike ịme ahịrịokwu na-ekwu naanị ụda dịpụrụ adịpụ.
Ọ naghị eji ụdị echiche ọ bụla ma ọ bụ njikọ na họrọ maka ịdị mfe ụda olu.
Ọ nweghị ike ịmepụta ahịrịokwu n'onwe ya na ndị ọ na-eme bụ n'ihi nṅomi.
Ọtụtụ ụmụaka na-amalite ikwu okwu n'oge, ha na-emezigharị asụsụ ha n'ime ọtụtụ afọ.
Otu esi enyere nwata aka na mmepe asụsụ
Nne na nna nwere ike ịmalite ịgụ akụkọ nke mere na nwa ahụ ji nwayọọ nwayọọ mara asụsụ ahụ.
Kwadebe ahịrịokwu dị mfe nke dabara n'afọ nwata na na-eji ha eme ihe kwa ụbọchị.
Ọ dị mma ịkpọ aha mgbe niile omume dị iche iche a ga-eme.
ikwugharị na-aga n'ihu na ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị okwu kwa ụbọchị dị ka ụlọ, akwa, mmiri, wdg.
Soro nwa gị gwuo egwuregwu ụfọdụ metụtara ya n'asụsụ ma ọ bụ okwu.
Na nkenke, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị nke ukwuu maka igbu oge n'okwu ụmụaka na ụmụ ọhụrụ. Nwa ọ bụla chọrọ ụda nke ya ma ọ dịghị mma iji ya tụnyere ụmụaka ndị ọzọ. Ọ bụrụ na, n'agbanyeghị afọ ndị ahụ, nwatakịrị ahụ nwere ihe isi ike ikwu okwu, ọ dị mma ịgakwuru onye ọkachamara iji wepụ nsogbu ọ bụla nwere ike igbochi mmepe asụsụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Nwa » Kedu mgbe enwere ike igbu oge na ụmụaka?
Otu ibi n'ụlọ adịghị mma na-emetụta ahụike gị
Anụ anụ na-esi ísì ụtọ na broccoli na yogọt